Isahluko 97 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Izimfihlakalo Zami zambulwa kini nsuku zonke—niyaziqonda ngempela? Niqinisekile ngempela ngazo? Niyakwazi ukubona lapho uSathane enikhohlisa? Lokhu kunqunywa ngokuhambisana neziqu zenu zokungokomoya empilweni. Ngenxa yokuthi ngithi zonke izinto zimiswa Yimi ngaphambili, kungani-ke ngiba sesimweni somuntu mathupha ukuze ngiphelelise amadodana Ami angamazibulo? Ngaphezu kwalokho, kungani ngenze umsebenzi omningi kangaka abantu abacabanga ukuthi awunamsebenzi? Ingabe Yimi engididekile? Khumbulani lokhu! Konke engikwenzayo kwenziwa hhayi ukuze ngizuze amadodana Ami angamazibulo kuphela kodwa ngokubalulekile okwengeziwe kwenziwa ukuze kuhlaze uSathane. Nakuba engedelela, kodwa nginamandla okwenza inzalo yakhe imhlubuke, futhi iphenduke idumise Mina. Lokhu ikakhulu kungenxa yokuthi isinyathelo esilandelayo somsebenzi sihambe kahle, futhi ukuze umhlaba wonke uhalalise futhi udumise Mina futhi zonke izinto eziphefumulayo ziyogoba amadolo Kimi futhi zingidumise; lokhu ngempela kuyoba wusuku lwenkazimulo. Ngiphethe zonke lezi zinto ezandleni Zami futhi lapho imidumo eyisikhombisa iduma zonke izinto ziyofezwa ngokugcwele, zingaguquki nhlobo, ziqinile zonke. Kusuka kulelo qophelo kuya phambili kuyongenwa empilweni entsha yezulu nomhlaba, kungenwa ezimweni ezintsha ngokuphelele, futhi impilo yombuso iyoqala. Kodwa kunjani ngaphakathi embusweni? Abantu abakwazi nhlobo ukukubona ngokucacile (ngoba akekho oseke wezwa ukunambitheka kwempilo yombuso ngaphambili, ngakho ilokhu icatshangwa emiqondweni yabantu kuphela futhi yazindlwa ezinhliziyweni zabo). Ekusukeni empilweni yebandla kuyiwa empilweni yombuso, okungukusuka esimweni samanje kuyiwa esimweni esizayo, izinto eziningi abantu abangakaze bazicabange ziyokwenzeka ngalesi sikhathi. Impilo yebandla iyisandulelo sokungena empilweni yombuso, ngakho ngaphambi kokuba khona kwempilo yombuso akukho engingeke ngingakwenzi ekukhuliseni impilo yebandla. Iyini impilo yebandla? Iyibona bonke, kuhlanganisa amadodana Ami angamazibulo, bedla, bephuza, futhi bethokozela amazwi Ami futhi bazi Mina, ngalokho bethola ukushiswa nokucwengwa Yimi, ukuze baqonde izinqumo Zami zokuphatha, ukwahlulela nolaka Lwami, ukuze bakwazi ukugwema ukwenza icala empilweni yombuso. Futhi iyini impilo yombuso? Impilo yombuso yilapho amadodana Ami angamazibulo ebusa njengamakhosi kanye Nami, ebusa phezu kwabo bonke abantu nazo zonke izizwe (ngamadodana Ami angamazibulo Nami kuphela esikwazi ukuthokozela impilo yombuso). Nakuba amadodana Ami nabantu Bami abavela kubo bonke abantu nakuzo zonke izizwe bengena embusweni, abakwazi ukuthokozela impilo yombuso. Impilo yombuso ingathokozelwa kuphela yilabo abangena endaweni yokomoya. Ngakho ngamadodana Ami angamazibulo kuphela kanye Nami esikwazi ukuphila emzimbeni, kanti amadodana Ami nabantu Bami basala behleli enyameni. (Nokho lokhu akuyona inyama ekhohlakaliswe nguSathane. Yilokhu ukubaluleka kwamadodana Ami ebusa kanye Nami njengamakhosi.) Imimoya, imiphefumulo nemizimba yabo bonke abanye abantu iyothathwa iphonswe eHayidesi. Lokhu kusho ukuthi laba bantu bayobhubha ngokugcwele futhi bayophela (nokho kufanele badlule kuzo zonke izibopho nonya lukaSathane, njengobunzima nezinhlekelele). Lapho sekwenziwe lokhu, abantu bangangena ngokusemthethweni emzileni olungile wempilo yombuso futhi ngiyoqala ukwambula ngokusemthethweni izenzo Zami (zambulwe ngokusobala futhi zingafihlwa). Kusuka lapho kuya phambili, nakanjani ngeke kusaba khona ukububula futhi ngeke kusaba nezinyembezi. (Ngoba ngeke kusaba khona lutho olungalimaza abantu, noma olungabenza bakhale noma ibadalele ukuhlupheka, futhi lokhu kunjalo nakumadodaba Ami nakubantu Bami; kodwa kukhona iphuzu elilodwa okufanele ligcizelelwe, elingukuthi amadodana Ami nabantu Bami bayoba yinyama kuze kube phakade.) Konke kuyothokoza futhi kube umbono wenjabulo. Ngeke kube yinto ephathekayo, kuyoba yinto engakwazi ukubonakala ngamehlo enyama. Labo abangamadodana Ami nabo bayokwazi ukukuthokozela; lokhu kuyisenzo Sami esimangalisayo namandla Ami.
Nginifisela ukuba nikwazi ukufuna intando Yami futhi niyicabangele inhliziyo Yami ngazo zonke izikhathi. Injabulo eyedlulayo ingabhidliza yonke impilo yakho, kanti ukuhlupheka okwedlulayo kungangenisa izibusiso zaphakade. Ningabi lusizi; le yindlela okufanele ihanjwe. Bengihlala ngithi ngaphambili: “Kulabo abazikhandlela Mina ngobuqotho, nakanjani ngiyonibusisa kakhulu.” Ziyini izibusiso? Aziyizo kuphela ezitholakala namuhla, kodwa ngaphezulu ziyilezo ezizothokozelwa esikhathini esizayo—yilezi kuphela izibusiso zangempela. Lapho nibuyela eNtabeni iSiyoni, niyokhombisa ukubonga okungapheli ngokuhlupheka kwenu kwamanje, ngoba lokhu kuyisibusiso Sami. Ukuphila manje enyameni kungukuba seNtabeni iSiyoni (okusho ukuthi uphila ngaphakathi Kimi), kanti ukuphila emzimbeni kusasa kuyoba wusuku lwenkazimulo, futhi lokhu kunjalo ngokwengeziwe eNtabeni iSiyoni. Emva kokuzwa la mazwi engiwashoyo, khona-ke niyakuqonda lokho okuqondiwe ngeNtaba iSiyoni. Intaba iSiyoni iyigama elisho okufanayo nelithi umbuso, futhi liyigama lokungokomoya. ENtabeni iSiyoni namuhla, niyinyama eyamukela induduzo futhi ethola umusa Wami; eNtabeni iSiyoni yesikhathi esizayo, niyoba semzimbeni nithokozela isibusiso sokubusa njengamakhosi. Lokhu akufanele neze kushaywe indiva. Futhi akufanele neze kuvunyelwe izikhathi lapho izibusiso ezingazuzwa zedlule; namuhla kunamuhla, empeleni, futhi kwehluke kakhulu osukwini lwakusasa. Lapho ufinyelela ekuthokozeleni izibusiso, uyocabanga ukuthi umusa wanamuhla awufanele ukuthi kukhulunywe ngawo. Yilokhu engikubeka kuwe, futhi kuyiseluleko Sami sokugcina.